Vamwe Varimi Votadziswa Kurima Minda Yavo kuMashonaland West neVari Kuchera Goridhe
Vari kuchera zvicherwa ava vanonzi vari kungochera chero muminda mevanhu zvisina kuwirirana nevaridzi.
Vamwe varimi mudunhu reMashonaland West vanoti vave kutadza kurima minda yavakapihwa nehurumende nekuda kwevanhu vari kuchera goridhe muminda yavo.
Varimi ava, avo vakapihwa minda pasi pechirongwa chehurumende chekuwanisa ivhu kuruzhinji rwevanhu vanoti nguva dzakawanda vave kuwana minda yavo yavakucherwa nevanhu vanochera zvicherwa vasina mvumo kana kuti makorokoza, avo vanenge vachitsvaga goridhe.
Varimi ava vanoti haasi makorokoza chete ari kuchera minda yavo, kunyange vanochera goridhe zviri pamutemo vanongokaruka vauya nemagwaro anovapa mvumo yekuchera muminda yavo zviri pamutemo.
Mumwe mugari wekuMakonde akachererwa mumunda make ndiAmai Mary Nyabadza.
Amai Nyabadza vanoti hurumende ingadai isina kupa vanhu minda munzvimbo dzizere zvicherwa nekuti vave kutotadza kurima.
Vanoti vanochera zvicherwa ava vanoita zvemhirizhonga kana munhu akada kuvarambidza.
Mumwe murimi akachererwa mumunda make, VaReason Dandawa, vanotiwo vanochera goridhe vanoita madiro ajojina uye vanoita zvemhirizhonga.
VaDandawa vanoti chikamu chinoti anochera zvicherwa anoonekwa seakakosha kudarika murimi mumaziso emutemo chinofanirwa kuvandudzwa.
Mumwe murimi akapindirwawo mumunda make emahekiteya makumi masere kwaZvimba nevanochera goridhe, VaGerald Mashiri, vanoti vakapindirwa nevanhu vatanhatu vari kuchera goridhe vasina kuvapa mvumo.
VaMashiri vanoti hurumende inofanirwa kupa murimi mukana wekutanga wekuti achere goridhe riri mumunda make.
VaMashiri vanoti vanochera goridhe ava vanosiya vasina kuvhara makomba vachiti bazi rinoona nezvemigodhi pamwe nezvicherwa ndiro riri kuita zvehuwori zvekupa vanochera ava marezinesi pasina gwaro rekuti murimi abvuma here kana kuti kwete.
Sachigaro weboka remadzimai anoita zvekuchera zvicherwa, Muzvare Chiedza Chipangura, vanoti gakava remurimi nemucheri rinofanirwa kupedzwa nekukurumidza nemukuru webazi rezvemigodhi nezvhicherwa wedunhu zviri pamutemo.
Muzvare Chipangura vanoti zvikatora nguva rinenge rave dambudziko rehuwori.
Panyaya yevacheri vari kurambira paminda, Muzvare Chiedza vanoti dambudziko rine vamwe varimi nderekuti vanoda kurambira nzvimbo asi ivo vasingacheri zvicherwa vachida kungorima chete.
Mukuru webazi rezvemigodhi nezvicherwa mudunhu reMashonaland West, Amai Sibongubuhle Mpindiwa, vanobvuma kuti pane nyaya dzine chitsama dzekusawirirana kwevarimi nevanochera zvicherwa zvakaita segoridhe, asi vachiti nyaya dzacho dzinongosiyana nenzvimbo.
Amai Mpindiwa vanoti rimwe dambudziko rinoita varimi kufunga kuti zvicherwa zvinenge zviri muminda mavo ndezvavo vachiti izvi hazvisi izvo nekuti zvicherwa ndezvehurumende iyo inopa bvumo kune wose anenge akumbira bvumo yekuchera.
Amai Mpindiwa vanoti nzvimbo yose munyika inogona kupihwa mvumo yekuti icherwe zvicherwa kusanganisira nzvimbo dzehurumende.
Nyanzvi munyaya dzezvicherwa vachishanda vakazvimiririra, VaGeorge Mugani, vanoti mutemo unopa mucheri wezvicherwa mvumo yekuchera zvicherwa kunyange pamunda wemumwe munhu sezvo mvumo yekurima iri pamasendimita makumi matatu kubva pamsoro kudzika pasi chete, zvichireva kuti kubva panogumira masendimita makumi matatu aya zvichidzika, pasi pose hapachisiri pake, asi panenge pave pehurumende.
Panyaya yemutemo wemigodhi nezvirimwa VaMugani vanoti mutemo uri kuvandudzwa kuchengetedza murimi sezvo pave nemutemo wekuti mucheri wezvicherwa anofanirwa kupihwa mvumo nemurimi kana aine mahekiteya ari pasi pezana.
Ongororo yakaitwa neStudio 7 inoratidza kuti dambudziko iri rakatekeshera mumatunhu madiki ose muMashonaland West anoti Hurungwe, Makonde, Zvimba, Norton, Chegutu, Kadoma pamwe neMhondoro, uye rinowanikwawo mune mamwe matunhu ose emunyika ane zvicherwa zvakaita segoridhe.